Dariiqa adag, Kaniisada adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Sababta oo ah isaga laftiisa ayaa yidhi: "Xaqiiqdii anigu ma doonayo inaan gacantayda kaa qaado, runtina ma doonayo inaan kaa tago." (Cibraaniyada 13, 5 ZUB).
Maxaan qabannaa haddii aanaannaan jidkeenna arki karin? Suuragal maahan suurtagal in nolosha la maro iyada oo aan jirin walwal iyo dhibaatooyin nolosha la imanaya. Mararka qaarkood kuwan way adag tahay in loo dulqaato. Nolosha, waxay umuuqataa, inay tahay mid ku meel gaadh ah cadaalad daro. Maxay sidaa u tahay? Waxaan jeclaan laheyn inaan ogaano taas. Waxaan dhib ku qabnay kuwa aan la saadaalin karin waxaanan la yaabanahay micnaha taasi. In kasta oo aysan tani wax cusub ahayn, haddana taariikhda aadanaha waxaa ka buuxa cabashooyin, laakiin suurtagal ma aha in la fahmo waxaas oo dhan xilligan. Laakiin hadaan aqoon la’aani jirin, Eebbe wuxuu ina siiyaa wax aan ugu yeedhno caqiido. Waxaan leenahay caqiidooyin meeshaan uga liidan aragti guud iyo faham buuxa. Markuu Eebbe iimaan inaga siiyo, waxaan horay ugu soconaa aaminaadda, xitaa haddaannan arki karin, fahmin ama aan maleyn karin sida aan ku wadno.
Markaan la kulanno dhibaatooyin, Eebbe wuxuu ina rumeeyaa inaanaan ahayn inaan culeyska kaligiis qaadno. Marka Ilaah, oo aan been sheegi karin, wax u ballanqaado, waxay u eg tahay sidii inay runti run tahay. Muxuu Eebbe noogu sheegayaa waqtiyada adag? Bawlos wuxuu noogu sheegayaa 1 Korintos 10, 13 “Weli wax aadan jirrabaadda gelin. Laakiin Eebbe waa aamin, oo kuu oggolaan maayo inaad isku liibaanto maalkaaga, laakiin wuxuu sidoo kale abuuri doonaa bixitaanka jirrabaadda si aad u adkaysato.
Tan waxaa lagu taageeray oo lagu sii sharxay Sharciga Kunoqoshadiisa 5, 31 iyo 6: «Awoodda oo adkayso, ha cabsanina oo ha ka baqina! Waayo, Rabbiga Ilaahiinna ahu wuu idinla jirayaa. Gacanti kaa soo celin maayo, isna kaa tegi maayo. Laakiin Rabbigu waa idin hor socdaaye, isagu wuu kula jiri doonaa, mana uu kaa leexin doono gacantaada, kumana bixi doono. Ha cabsanina oo ha qalbi jabina.
Macno malahan waxa aan soo marnay ama meesha aan u socon karno, waligeen kaligeey ma sameyno. Xaqiiqdu waxay tahay, Ilaah baa na sugaya! Isagu wuxuu inaga horreeyey inuu jid nooga diyaargaroobo.
Aynu ku guuleysanno iimaanka uu Eebbe ina siiyo oo aan ku kalsoonaanno wax kasta oo noloshu ina siiso si aynu u maamusho.
waxaa qoray David Stirk